काठमाडौँ : धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज झिनो अङ्कले मात्रै बढेको छ । सोमबार उच्च अङ्कले बढेको बजार आज केही सुस्ताएर झिनो अङ्कले मात्रै वृद्धि भएको हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार
काठमाडौं : धितोपत्र बजारमा यस साता शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक असन्तुलित अवस्थामा रह्यो । बजारमा कारोवार मापक नेप्से बढ्ने र घट्ने क्रम जारी रह्यो । साताभर कूल १७५ कम्पनीको शेयर कारोवार भयो । नेपाल
फेरि ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाडौं । साताको पाचौं दिन अर्थात बिहिबार नेपाली बजारमा सुनको मुल्य बढेको छ । सुन आज तोलामा रु ३०० रुपैंयाँले बढेको हो । सुनको भाउ बिहीबार तोलाको ७६ हजार रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ
आज फेरि सुनको मुल्य घट्यो, तोलाको कति छ ?
काठमाडौँ । साताको चौथो दिन अर्थात बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मुल्य घटेको छ । सुन आज तोलामा रु २०० रुपैंयाँले घटेको हो । मंगलबार तोलामा ७५ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य बुधबार तोलाम
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको भाउ मङ्गलबार तोलामा एक सय रुपैयाँले घटेको छ । सुन मङ्गलबार तोलाको ७५ हजार नौ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । सोमबार र गएको आइतबार तोला
७ प्रतिशतले सुधार हुँदा १२२ करोड पुग्यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको आम्दानी
काठमाडौँ : स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कले १२२ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएको छ । बैङ्कले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण अनुसार बैङ्कले १ अर्ब २२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको हो । यो नाफा
९१ दिने अवधिको १० करोडको ट्रेजरी बिल विक्री हुँदै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल रू. १० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल विक्री गर्ने भएको छ । बैंकले यही माघ २७ गते सोमवार उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल विक्री गर्न लागेको हो । बैंकका अनुसार कुल ९१ दिने अवधिका
प्रदेश सरकारको योजना बैंक : स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निमार्ण गर्ने लक्ष्य
२०७६, माघ १५ राकेश लाल दास : नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा उल्लेखित विकास र समृद्धिको आकाङक्षालाई पुरा गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश नं. १ ले परियोजना बैंकको अवधारणा ल्याएको छ । प्रदे
आन्तरिक उत्पादनमा केन्द्रित लगानीलाई बिशेष जोड दिनुपर्छ : मन्त्री आङबो
विराटनगर : प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्र बहादुर आङबोले विकसित पुँजीवादसँगै आयातलाई निरुत्साहित पार्दै निर्यात प्रर्वद्धन गर्न आन्तरिक उत्पादनमा केन्द्रित लगानीमा बिशेष जोड दिनुपर्न
बैंकका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई सफाइ
काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रलाई समस्यामा पार्नेलगायत आरोप लागेपछि निलम्बनमा परेका नेपाल राष्ट्र बैङ्कको डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई सरकारले सफाइ दिएको छ । प्रवक्ता बाँस्कोटाले श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपका विष